Faahfaahinta Talooyinka Soo Saarida Muuqaalka iyo Noocyada | Martech Zone
Faahfaahinta Tabaha Soo Saarista Fiidiyowga iyo Noocyada
Khamiis, Agoosto 20, 2015 Talaado, Oktoobar 6, 2015 Douglas Karr
Mid kale ayaynu ku dhex jirnaa soosaaraha muuqaalka muuqaalka sidaan qorayo tan waxaan u arkay natiijooyin yaab leh fiidiyowyada aan horay u soo saarnay, qoraalnay, ama wadaagnay. Kani waa muuqaal sifiican oo dhammaystiran oo faahfaahsan loogu abuurayo fiidiyowyo sharraxaya oo bixiya geedi socod adag oo loogu talagalay abuurista fiidiyowyo kaxeeya ka-qaybgalka iyo beddelaadyada.
Marka, sidee u abuurtaa fiidiyow sharraxaya oo kordhin doona heerkaaga beddelka? Si aan kaaga caawiyo, waxaan sameeyay infograaf jabinaysa geeddi-socodka abuuritaanka fiidiyowga sharraxa ugu fiican. Neil Patel, Quicksprout.
Waxaan wadaagnay video sharaxe ah fiidiyowyada sharxa inaad rabto inaad iska hubiso. Waxbadan ayaan wadaagnay tusaalooyinka fiidiyowga sharxa, inkasta oo macluumaadkan ka socda Quicksprout uu leeyahay xitaa intaa ka sii badan!
Haddii aad jeclaan lahayd inaad ku aragto hage kale Soosaaraha Muuqaalka Muuqaalka, fiiri McCoy Productions Tilmaamaha Soosaaraha Muuqaalka Muuqaalka.
Kaliya horumarka aan ku sameyn doono shaxdan ayaa ah soosaaraha muuqaalka muuqaalka tallaabooyinka lagu qeexay. Talaabada 2aad waa qoraalka talaabada 3-na waxay sheekeynaysaa fiidiyaha madaxa. Anigu kuma raacsani… waxaana ku adkeysanayaa in la soo saaro sawir qallafsan oo muuqaal kasta ah oo leh qoraalka ku habboon, ka dibna la dhigo derbiga ama miiska, wuxuu bixiyaa sawir aad u cad oo fudud iyo xawaaraha fiidiyaha sharraxaya. Naqshadeeye kasta oo fiidiyow ah oo aan lashaqeynay ayaa tan keenay waana la keydiyay tan wax soo saar ah
Hadday tahay inaan gadaal iyo gadaal u dhaqaajinno fiidiyowga la soo saaray, waxaa laga yaabaa inaan waqti ku luminnay muuqaalo animation ah oo aan la adeegsan doonin, ama aan ka maqnayn soosaaridda muuqaallo u baahan in lagu daro. Inta badan sida jees jees codsi ah ayaa ilaaliya waqtiga horumarinta, majaajillada goobta ayaa kaa badbaadin doonta tan dadaal ah soosaarkaaga muuqaalka fiidiyowga ah.
Tags: samee fiidiyow sharraxavideo sharaxesoosaaraha muuqaalka muuqaalka
4ta walxood ee ay tahay inaad ku lahaato qayb kasta oo ka mid ah waxyaalaha ay ka kooban tahay
Fahmitaanka Jiilka Rabitaanka vs Generation Lead